«Can 2019»: handefa ny lalao 52 ny Canal Plus Madagascar | NewsMada
«Can 2019»: handefa ny lalao 52 ny Canal Plus Madagascar
Noho ny maha fetin’ny olon-drehetra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”, hatao any Egypta, ny 21 jona ka hatramin’ny 19 jolay ho avy izao, fantatra fa handefa ireo lalao rehetra miisa 52 ihany koa ny Canal Plus Madagascar. Io no nambaran-dramatoa, Razafindrakoto Onjatiana, taleny, tamin’ny mpanao gazety, teny Andraharo, omaly.
Ankoatra izay, nampahafantarany ihany koa ireo “chaines” vaovao mandrafitra ny Canal Plus toy ny 6ter sy ny Canal + action, misy ireo karazana horonantsarimihetsika ary ny gulli, natokana ho an’ny ankizy dimy hatramin’ny 10 taona ary ny France info, milaza ireo vaovao politika sy toe-karena ary ny sosialy frantsay.
Mahazo tombony manokana ireo mpankafy ny fanatanjahantena satria hisy koa ireo fanadihadiana mahakasika ireo ekipa hiatrika ny “Can 2019” sy ireo fifaninanana isan-tokony, any eoropa toy ny “ ligue 1” sy ny “champions ligue” ary ny “Europa ligue”, eo amin’ny baolina kitra. Misy koa ny fifaninanana, ho an’ny taranja tenisy sy ny hazakazaka fiarakodia ary ny basikety NBA.
Tsy misy sarany, ny “décodeur”, nanomboka ny 1 ka hatramin’ny 30 jona, ho avy izao.